Ogaden News Agency (ONA) – Booqashadii Kim Jong Un ee dalka Shiinaha
Booqashadii Kim Jong Un ee dalka Shiinaha
Posted by Daljir	/ March 28, 2018
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa dib ugu noqday kadib safar hal maalin qaatay oo uu ku tagay dalka ay jaarka iyo xulafada yihiin ee Shiinaha.
Booqashada Kim Jong Un oo ahayd tii ugu horeysay oo uu dibada ku tago tan iyo intuu xilka la wareegay ayaa sidoo kale ahayd mid qarsoodi ah, saxaafada caalamka ayaa maalin kahor si weyn u hadal heysay booqashada qarsoodiga ah ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku tagay caasimada Shiinaha.
Wafdiga Kim Jong Un uu hogaaminayey oo ku safray Tareen ayaa si weyn loo illaalinayey in xogtooda ay saxaafada iyo shacabka ka war helaan, waxaana si weyn loo adkeeyey amniga bartamaha caasimada Shiinaha iyo goobaha uu kula kulmayey hogaanka dalkaasi.
Warbaahinta China ayaa safarkan shaaciyey kadib markii ay soo dhamaadeen kulamada dhexmaray Kim Jong Un iyo madaxda China.
Safarkan Kim Jong Un ayaa ah mid horudhac u ah wadahadalada dhawaan la filayo inay u bilowdaan dowladiisa iyo dalalka ay is hayaan ee Kuuriyada Koonfureed iyo xulafadooda Maraykanka oo la qorsheenayo inay dhacaan labada bil ee soo socota April iyo May.
Kim Jong Un ayaa sidoo kale doonaya inuu dib u hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay Shiinaha oo ah xulafadooda ugu muhiimsan oo ay leeyihiin xiriirka ugu weyn ee ganacsiga.
Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayey sanadihii lasoo dhaafay oo ay dowlada Kuuriyada Waqooyi diiday inay aqbasho baaqa uga imaanayey beesha Caalamka iyo shiinaha ee joojinta tijaabooyinka hubkooda Nukliyeerka iyo Gantaalada.
Shiinaha ayaa markii ugu horeysay taageeray cunaqabateynta la saaray dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kadib tijaabooyinkoodii nukliyeerka iyo gantaalada sanadkii lasoo dhaafay.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in uu sheegay Kim Jong Un in dowladiisa ay diyaar u tahay inay barnaamijkooda hubka nukliyeerka hadii gebi ahaan geyiga Kuuriyada laga mamnuucayo hubkaasi, balse wuxuu sheegay in laga rabo inay Maraykanka iyo xulafadiisa ay iyagana kasoo baxaan wajibaadka saaran iyo inay u hogaansamaan xasilinta gobalka.